Umlawuli we-Ex-Oyo State Governor, u-Ajimobi Ufile-Iindaba zaseNigeria kunye ne-Global Sto
FI-Ormer Oyo State Rhuluneli, u-Abiola Ajimobi ufile, i-NASA ukubiza amagama kwikomkhulu emva kokuba injineli yomfazi wokuqala omnyama, isiXeko saseManchester ngokuchasene neLiverpool ukuba yenzeke e-Etihad. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. U-Rhuluneli we-Ex-Oyo u-Abiola Ajimobi ufile
Ukuhamba kwexesha Abiola Ajimobi
Abiola Ajimobi, owayesakuba yirhuluneli ye-Oyo State, owayekwintsimbi yokuxhasa ubomi iiveki, uswelekile. Uneminyaka engama-70 ubudala, owangeniswa kwisibhedlele sokuqala se-Cardiology e-Ikoyi, eLagos, emva kwengxaki ye-coronavirus, usweleke ngoLwesine.
NgoMvulo, umthombo othembekileyo osondeleyo kwirhuluneli yangaphambili uxelele I-media ukuba u-Ajimobi wayekumatshini wokuxhasa ubomi emva kokuba ewele kumqolo onzulu kwaye unokungaphindi aqhubeke nokubonwa ziingcali zonyango ezazijikeleze yena.
Umthombo ufumanise ukuba irhuluneli yangaphambili, u-Ajimobi wayehlinzwa ngokuhlinzwa emgibeni we-Lagos kodwa akazange enze nkqubela ngelixa izintso zakhe nazo bezasilela, emva koko wabhengezwa ukuba ubhubhile.
2. Unjingalwazi waseGhana u-Rita Dickson ngu-Deputy-Chancellor wokuqala wabasetyhini
Unjingalwazi Rita Akosua Dickson oqeshiwe njenge-Sekela-Chansela yokuqala yabasetyhini ye-KNUST
Unjingalwazi (Mnu) URita Akosua Dickson, unjingalwazi kwezokhemesti utyunjwe njengo-Sekela-Chancellor omtsha we-Kwame Nkrumah Dyunivesithi yezeNzululwazi nobuChwepheshe (i-KNUST), eGhana. Unjingalwazi u-Dickson yi-Pro-Deputy-Chancellor ye Dyunivesithi.
Uba yi-Vice-Chancellor yokuqala yabasetyhini ye-KNUST. Uya kuthatha isikhundla sikaProf Kwasi Obiri Danso Ngomhla woku-1 ku-Agasti ka-2020. IBhunga le-KNUST kwindibano yalo ekhethekileyo yangama-258 ebibanjwe ngoLwesine, nge-25 kaJuni, ngo-2020, lenza ingqesho, isiteyitimenti esikhutshwe yiOfisi yezoBudlelwane beDyunivesithi sithe. Ukuqeshwa kwakhe kangangesithuba seminyaka emine kuya kuqala nge-1 Agasti 2020 ukuya kuJulayi 31, 2024.
3. Ukutshixeka: Iminxeba yokubuyela kwiNqanaba lesi-5 yongeza njengokosuleleka okutsha nje eMzantsi Afrika
NgoLwesithathu kuphawula ukwanda okukhulu kosuku olunye kumatyala kuba i-COVID-19 yafunyanwa okokuqala eMzantsi Afrika. Bebonke bangama-2,205 abantu abasweleke ukusukela ngoMatshi, kwaye urhulumente uyaqhubeka nokunciphisa izithintelo zakhe ezivalelekileyo ngaphandle kweetalente ezandayo. Nangona kunjalo, usodolophu omnye akazimisele ukulandela imigaqo yangoku.
Mzwandile Masina ithi isixeko ngoku kufuneka sisebenze 'njengakwiNqanaba lesi-5 lokuvala'. Ucebise abantu ukuba bahlale ekhaya kangangoko banakho ngelixa kuthintela ukunxibelelana nomnye umntu.
4. I-NASA yegama lokuba nguNdlunkulu emva kwenjineli yomfazi wokuqala omnyama, uMary Jackson
I-NASA iya kuthiya igama likomkhulu layo eWashington DC emva kwenjineli yayo yomfazi wokuqala omnyama, Mary Jackson. Umlawuli we-NASA UJim Bridenstine Uthe uJackson uncede ekunciphiseni izithintelo kubantu baseMelika baseMelika kunye nabasetyhini kubuNjineli neTekhnoloji.
Ibali likaMary Jackson laxelwa kwifilimu yango-2016 Amanani afihliweyo. Uzalelwe eHampton, eVirginia, wasweleka ngo-2005. Kunyaka ophelileyo, i-NASA iphinde yaqamba igama lesitalato ngaphandle kwekomkhulu njengeNdlela yeeNdawo eziFihliweyo. Le ntshukumo iza ngexesha lokucinga ngaphakathi kwe-US malunga nokungabikho kokusesikweni kweembali okwaphathwa kakubi ngabantu base-Afrika baseMelika.
5. IManchester City vs Liverpool edlalwa e-Etihad Stadium
U-Mohamed Salah ufake amanqaku kwi-3-1 yaseLiverpool ukuphumelela iManchester City xa la maqela ehlangana kwiPremier League ngoNovemba
IManchester City inikwe imvume yokubamba umdlalo wabo wePremier League neLiverpool ngoLwesine, nge-2 kaJulayi e-Etihad Stadium.
Umdlalo ophakathi kwamanqindi amabini aphezulu weligi wawunokwenzeka kwindawo yokungathathi hlangothi ngenxa yothuselo malunga nabalandeli ababehlanganisana ngaphandle. Kodwa iqela labacebisi ngokhuseleko kwiqela laseManchester City (SAG) lavuma ukuba lingadlalwa kwikhaya leSixeko.
ILiverpool iyakunyuka itayitile ukuba iCity iyasilela ukubetha iChelsea ngalo Lwesine.
Uhlobo Rave Juni 25, 2020
U-Yemi Alade ufumana ukuba sesichengeni kuLuthando Lokwenyani + ngeNgoma eziNtsha zokuvula iVeki yeveki
Izinto ezi-5 eziLunge kakhulu ukuba ungaziqwalaseli ngeDolophu eqaqambileyo yaseWashington kunye neLizwe likaSeptemba
UGqr Iyabo Uyathetha: Ngaba ungatshata kwaye Wonwabile?
Iifayile ze-Flashback: Ukuzivelela kukaKhloe Kardashian's Red Carpet Style
Bukela: Amapolisa aseDubai Thatha I-Hushpuppi kunye ne-Gang Yakhe ye-Intanethi
I-Rave News Digest: UNaira Marley ubanjiwe, u-Oprah uthenga iBhodi yeBhodi yokuFuna uBulungisa, uWillie + Okungakumbi
I-Rave News Digest: I-Diddy ivelisa i-Burna Boy 'kabini Njengokude' i-albhamu, eLos Angeles ukohlwaya abo baphosayo kwi-Party, iSanchez + nangakumbi